Karazana fahitalavitra inona no azoko ampiasaina amin'ny EMD? - Easy Multi Display
Karazana fahitalavitra inona no azoko ampiasaina amin'ny EMD?
Noforonina On Novambra 4, 2019
Ny fananana ny efijery mety dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fampisehoana ka ny fanontaniana dia karazana TV inona no azoko ampiasaina amin'ny EMD?
Nametraka ny lohanay izahay ary mametraha fanontaniana sasany mba hanontanianao ny tenanao alohan'ny hisafidianana ireo efijery aseho anao.
1. Inona ny teti-bolanao?
Raha mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny vidiny ianao, dia zava-dehibe ny fahafantaranao ny teti-bolanao alohan'ny hanombohanao, mba hahafantaranao ny zavatra azonao omena azy ary aza mandany fotoana mijery ny safidy tsy ao anatin'ny vidin'ny vidiny.
2. Inona ny tanjon'ny fampisehoanao?
Mampiasa fampisehoana ny olona noho ny antony maro samihafa, ireo tompona orinasa madinika mampiseho ny sakafo apetraka ao amin'ny efijery kely ao anaty trano fisakafoanana, ka ny fahitalavitra generika lafo vidy dia mety mifanaraka amin'ny azy ireo, fa ny mpanjifa lehibe kokoa kosa dia mampiasa ireo sary ireo ho toy ny toerana fanaovana dokambarotra ambony ao amin'ny varavarankelin'ny fivarotany. ary noho izany izy ireo dia mikaroka efijery mitady matihanina kokoa miaraka amin'ny tsipika matevina sy bitika kely indrindra. Ahoana no fomba hampiasanao ny fampisehoana?
3. Isaky ny inona no ampiasaina ny efijery?
Hanantona ny fampisehoana 24/7 ve ianao, sa mandritra ny ora vitsivitsy monja isan'andro? Rehefa misafidy ny efijery anao, dia azonao antoka fa manontany ilay mpanampy momba ny varotra momba ny fiainanao amin'ny efijery. Ny efijery fahita amin'ny alàlan'ny LCD dia manana androm-piainany lava kokoa noho ny fampisehoana an-tariby, na izany aza jereo amin'ny fivarotanao fampisehoana mba hahitanao ny fandrosoana ara-teknolojia farany indrindra.
4. Inona no ho filamatra ara-batana asehonao?
Mitady endrika endrika nentim-paharazana ve ianao, sa tianao kokoa ny fandaharana amin'ny sary amin'ny efijery?
Firy be ny rindrina na gorodona natokana ho an'ny fampisehoana ataonao?
Izany dia hampahafantatra anao ny haben'ny efijery azonao eritreretina. Raha mikasa ny hametraka fampirantiana marobe ianao dia diniho ihany koa ny haben'ny bezel amin'ny efijery.
5. Karazana fiovana inona no ilainao?
Mila tranga fampisehoana ve ianao, na mpizara fialamboly? Angamba mila rindrina rindrina, na projecteur ary efijery projecteur?
6. Karazana fampisehoana inona no tadiavinao?
Misy safidy maro isan-karazany amin'ny tontolon'ny fampisehoana fampisehoana.
Fahitalavitra mahazatra, manodidina ny 250 cd / m²
Ny efijery fampirantiana dinika manomboka amin'ny 300 cd / m² ka 4000 cd / m² miaraka amin'ny fitsaboana anti-refleksy tsara kokoa
Ny valin-teninao amin'ireo fanontaniana etsy ambony dia hanampy anao hanapa-kevitra amin'ny safidy farany amin'ny sehatra fampisehoana fampisehoana.
Ny marika fanta-daza indrindra amin'ny sehatry ny sonia nomerika dia LG, Samsung ary NEC.
Ny fakantsary manokana ataon'izy ireo dia manome antoka ny tahan'ny tsy fahombiazana ambany.
Azonao atao ny mampiasa telefaona fahitalavitra malalaka ao anaty trano misy hazavana ambany, saingy fantaro fa mety tsy hitondra ny vokatra na ny fahatokisana azy ireo izy ireo toy ny sary famantarana nomerika matihanina.
Raha tsy fantatrao hoe karazana karazana ilainao ianao, dia ampidino
ary avelao izahay hitari-dalana anao mandritra ny mety ho fisehoan-javatra mety.
Manangona ny piozila nomerika nomerika
Digital ivelan'ny trano: Mediam-pandrosoana vaovao ho an'ny marika francaise
Ohatra 5 momba ny fomba hanohanana ny famantarana nomerika ny orinasa madinidinika aorian'ny fisokafany